Nabata Ndị Zara Anyị Òkù Maka Ncheta Ọnwụ Jizọs nke Afọ 2016
N’abalị iri abụọ na atọ n’ọnwa Mach, anyị na-atụ anya na ihe dị ka nde mmadụ iri na abụọ ma ọ bụ karịa ga-abịa soro anyị cheta ọnwụ Jizọs. Ha ga-amụta ọtụtụ ihe mgbe onye ga-ekwu okwu ga-eji Baịbụl kọwaa otú Jehova si jiri Ọkpara ya gbapụta anyị nakwa otú ihe a Jehova mere ga-esi baara anyị uru. (Aịza. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jọn 3:16) Ma, ọ bụghị naanị onye ahụ ga-ekwu okwu ga-agbara ndị ahụ anyị kpọrọ òkù àmà. Anyị niile ga-eso gbaara ha àmà. Otú anyị ga-esi eme ya bụ ịnabata ha nke ọma. (Rom 15:7) Ka anyị kwuo ihe ụfọdụ anyị nwere ike ime.
Kama ịga n’oche gị nọrọ na-eche ka a malite, gaa kelee ma ndị zara anyị òkù ma ụmụnna ndị na-anaghịzi abịa ọmụmụ ihe
Ka gị na ndị ị kpọrọ òkù na-akpa na-achị, chetakwa na e nwere ndị ọzọ zara anyị òkù i kwesịrị ịga kelee. I nwere ike ịkpọrọ onye bịara ọhụrụ ka gị na ya nọrọ. I nwekwara ike ịsape Baịbụl gị ma ọ bụ akwụkwọ abụ gị na-egosi ya
A gbasaa, gbalịa ka ị mata ma ò nwere ajụjụ ndị ọ chọrọ ka a zaa ya. Ọ bụrụ na ọgbakọ unu ga-apụwa ozugbo unu mechara ka ọgbakọ ọzọ nwee ike ịnọ ebe ahụ mee nke ha, jụọ ya otú ị ga-esi ahụ ya ọzọ. Gbalịakwa gaa hụ ya ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị maghị ebe o bi ma ọ bụ nọmba ekwentị ya, i nwere ike ịsị ya: “M ga-achọ ịma otú i si hụ ihe omume a. Olee otú m ga-esi enweta gị ọzọ?”
mailto:?body=Nabata Ndị Zara Anyị Òkù%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016083%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nabata Ndị Zara Anyị Òkù